LG G6 ga-abata otu ọnwa tupu Samsung Galaxy S8 | Gam akporosis
LG iji malite LG G6 otu ọnwa tupu Samsung Galaxy S8
La agha na-eje ozi n'ihe gbasara njedebe ndị ahụ dị elu nke ga-abata n'ọnwa ndị na-esote. Ihe kachasị ama banyere mkparị a n'etiti Xiaomi, LG, Huawei na Samsung, bụ na a na-eche na isi anọ dị elu ga-ebu mgbape Snapdragon 835, mana ọ bụrụ na igbu oge na imepụta nke SoC dugara Galaxy S8 na-abịarute karịa ka anyị tụrụ anya ya, anyị amaghị ihe ga-eme ndị ọzọ.
MWC nọ ebe ahụ iwetara anyị omume ọma na uru nke ọnụ ahịa ndị a, n'agbanyeghị na ọ ga-adị mfe ịhụ LG G6 karịa Samsung Galaxy S8. Naanị ihe na - eme bụ na anyị amatala ugbu a na ọkwa Samsung nwere ike ikwuwapụta na MWC ka ọ mechara banye n’April. Ya mere, LG chọrọ ịga n'ihu ma malite G6 na Machị 10, izu abụọ mgbe o gosipụtara ya na njedebe nke February.
Nke ahụ ga-abụ ụbọchị mmeghe ahịa Korean. LG na-anwa ịlaghachi n'ihe ùgwù ya na ire ahịa na ọnụahịa a iji bido nkeji iri na ise n'otu ọnwa ahụ.
Ọ bụ ezie na anyị ka na-agbalị ịghọta ihe mere Galaxy S8 nọrọ ọdụ, ọ bụ ezie ka anyị na-enweta ozi ọma LG G ga-eji nke ilu Spanish a na-ekwu na ndị ọkụ azụ na-enwe nsogbu ...
Nke ahụ bụ ọnwa tupu LG G6 na ahịa O zuru ezu karịa ọtụtụ ka ha daa maka netwọkụ ha ma ọ bụrụ na ọ nwere ike ịnye ihe fọdụrụ na pipeline na LG G5. Nke a bụ enweghị akụkụ nke akụkụ modular yana ọnụahịa nwere batrị ikike dị elu. Ọ nwere n'ezie ọ dị mfe, ebe LG bụ akara a tụkwasịrị obi na nke jisiri ike gbakee n'afọ ndị ka njọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » LG iji malite LG G6 otu ọnwa tupu Samsung Galaxy S8
Playlọ Ahịa Google ugbu a na-egosi bọtịnụ ọhụrụ iji gosipụta ngwa arụnyere
[APK] Otu esi agbanye Android gi na Google Pixel